Isahluko se-2990- 2991 seDish esona siNgcono saCold | XperimentalHamid
Isahluko se-2990- 2991 seDish esona siNgcono kwiNoveli yeCold
funda Isahluko 2990 - 2991 yenoveli Isisitya esiBanda kakhulu sokuBanda simahla kwi-Intanethi.
UGenius ukhumbula le dilesi yendawo ngomzuzwana omnye:
Ke, waphakamisa intloko kwakhona, wajonga uGaia, wabuza ngelizwi elinzulu.
Nangona kunjalo, uMo Wuya akazange alinde mpendulo kaGaia.
Kwalandela inqindi lesinyithi eliqatha kakhulu.
UMo Wuya wothuka kwangoko kwaye waphepha ngokungxama.
Nangona kunjalo, uyisihloko esine-slapped master, ngaba uchasene neGaia?
Mamela nje isandi.
UMo Wuya wabethwa ngamandla ngephanyazo, kwaye umntu wakhe wonke wajika waba yibhola yomkhonto kwaye wabhabha waya ngqo.
Endleleni, waqhekeza iindonga eziphakamileyo ezingenakubalwa kunye neendonga ezingqindilili, waze ekugqibeleni wawa phantsi. Umlomo wegazi ugabhe wonke umhlaba.
“U… u… ufuna ukwenza ntoni?”
Andizimiselanga kuba lutshaba lwakho, kodwa kutheni undidubula kabini? ”
“Ngaba ngenene ufuna ukuxhokonxa ubungangamsha bam kwezobugcisa obushushu basehlathini?”
“Namhlanje, ukuba awundixeleli, xa ndibuyela ehlotyeni elishushu, yixelele le Martial God Temple ngalo mbandela. Ngelo xesha, utata wam, uKing of Fighters, kunye nomalume Sword Saint abasokuze bakuxolele! ”
UMo Wuya wayeza kuphambana, amehlo akhe abomvu akhwaza uGaia.
Nditshilo nje ukuba kukungaqondani, kodwa ngoku akunakwenzeka ukuba ungaqondi.
Ukuba awuvumelani nawe, ungayenza ngokuthe ngqo. Ngubani ongaqumbanga?
Kodwa uGaia wayikhathalele phi isoyikiso sakhe, wenyuka wabetha uMo Wuya kwakhona.
“Ndabona nje ngoku ukuba ulikholwa leNkosi yam, ngoko ke andinalo ulwazi olunjengolwakho.”
“Bendingalindelanga ukuba umgqakhwe ube nesibindi kwaye ungayihloniphi inkosi yam yegongqongqo?”
"Ukuba kunjalo, kutheni ndifanele ndiphinde ndibenento engavakaliyo?"
“Yiba nesibindi sokuthetha ngokungenatarhu kwinkosi yam yegongqongqo, ubone ukuba andizukuyiphazamisa na imilenze yakho yenja namhlanje!”
UGaia wagquma kabukhali.
Emva koko, uhlaselo olunamandla alunakunceda ukuphalaza.
Ngokukhawuleza emva koko, izikhalo zavakala kuyo yonke iLi Family Manor.
Ukubona imeko ephambi kwakhe, wonke umntu kusapho lakwaLi wothuka.
Wonke umntu wothuka wankwantya.
“Oku… ukhohlakele kangaka?”
IGritsberg, kwisikhululo senqwelomoya saseDaxing.
Njengokuba umgqumo uya usiba mncinci kwaye umncinci, inqwelo moya esuka eNairfork yema kancinci.
Kungekudala, kwaphuma abafana ababini, indoda nomfazi, kunye nesihlwele.
Aba bantu babini ayingabo abanye, nguMark noDenren Ye ababevela eNairfork.
“Mzala Maka, awuxeleli uMiss Xu kwangaphambili?”
"Ke angathumela imoto iyokulanda."
UDenren Ye wajonga uMarko wabuza ngokukrokra.
UMark wanikina intloko wancuma kancinci wathi: “Akukho sidingo.”
"UXiao Lei wayedinwe ngokwaneleyo ukuba angandixhasa ngalo mhlaba waseGritsberg."
Ayikuko ukuba asinakuhamba sodwa, kutheni ke simkhathaza? ”
“Ngaphezu koko, phambi kokuba ndiye kwaXu, ndizimisele ukumthengela izipho, nto leyo ayothusayo.”
"Ke Nizi, ndiyazithanda izinto ezothusayo ezincinci kunye nezothando ezincinci ukusukela ndisemncinci."
UMark wancuma kancinci, kwaye ukukhanya okuhambayo kunye nesithunzi kwavela engqondweni yakhe ngokungazi.
Ukuthetha ngalo, uMarko khange abone uXu Lei ixesha elide.
Ukugqibela kwam ukumbona, yayikukubuya kwam kwilizwe laseSakura.
“Kude kakhulu, andazi ukuba uXiao Lei usaphila na?”
UMark waphakamisa intloko wajonga mgama.
Kukho izakhiwo ezide ezimi apho, kwaye umoya uyaqhuba.
Nangona kunjalo, kungekudala emva kokuba uMark ehlile kwisikhululo seenqwelomoya, iselfowuni yakhe yakhala ngequbuliso.
Le yifowuni ephathekayo ayitshintshe nje. Isetyenziselwa ukunxibelelana no-Old Han. Ababaninzi abantu abalaziyo eli nani.
UMark wafinga iintshiya waphendula umnxeba.
“Haha, ndifuna inombolo yakho yefowuni esuka ku-Old Han.”
Ngomnxeba, ilizwi likaGaia elimangalisiweyo nelinentlonipho leza.
"Kukho into?" UMark wafinga iintshiya wabuza.
Yinto encinci leyo. ”
“Ndilapha kwilizwe elibandayo, kwaye ndadibana nendodana engamabhastile, ekwakufuneka nayo ibe ligorha ehlotyeni. Wathetha rhabaxa kuwe, wakukhathaza, wabethwa nam de wafa. Jonga, ndenze ntoni ngoku? ”
"Ngaba ufuna ukuyibulala ngokuthe ngqo?" Wabuza uGaia.
UMark uphendule ngokuzolileyo: "Hayi, imicimbi yeshishini, musa ukuchitha ixesha ngolu hlobo."
Kananjalo, ukuba ungadibana negorha ehlotyeni, ukuba akuyomfuneko, musa ukuba neentloni.
"Ngokubhekisa kuye lo mntu, buza ukuba ngoobani abazali bakhe, wazise, ​​kwaye usapho lwakhe lumlande."
"Dragon Lord, ndibuze, utata wakhe nguKumkani Wabalwi." Utsho uGaia ngokuqinileyo.
UMark wamangaliswa kancinci akuva oku.
Emva koko, wanikina intloko kwaye wancuma.
Kungenxa yokuba indlela imxinwa. ”
“Akunandaba, kuba ungunyana weKumkani yeFighters, akukho sidingo sokunxibelelana notata wakhe. Ndiyamazi utata wakhe. ”
"Ungathumela ikhuriya kwaye umthumele ngqo unyana kakumkani wokulwa."
"UKumkani weFighters uya esiba mdala, ke angamsindisa xa esenza izinto."
UMark wahleka kancinci, ngequbuliso elindele ukuba uKumkani Wabalwi ayibone le ntetho.
“Inkosi yenamba isengadlala.”
Ngomnxeba, ukuhleka kukaGaia ngokungakhathali kwafika ngesiquphe.
Emva kokuthetha ngezi zinto, naye uMark ubeke umnxeba.
Kwakusisiqwengana nje esincinci, uMarko akazange ayithathe ngokungathí sina, emva koko wakhokelela uDenren Ye kwivenkile ekufutshane yokulungiselela isipho uXu Lei.
Nangona kunjalo, uMarko wayesazi phi ukuba, kanye xa wehlayo kwinqwelomoya, wafumana uxwebhu olubomvu olungxamisekileyo oluvela eYanshan ikhulu leemayile kude.
“Emva koko uMark uphinde weza eGritsberg?”
Ngaphakathi eholweni, i-Sword Saint yazisula ngokuzolileyo ikrele elalisesandleni sayo.
UTang Hao, owayesecaleni, wayesandula kufumana iindaba zokuba uMark ubuyile eGritsberg, ubuso bakhe batshintsha kakhulu, watsho emangalisiwe.
Emva kokuba iJuggernaut ikuvile, nangona yayizolile kwaye inobunkunkqele njengaye, isandla esasibambe ikrele sasingenakungcangcazela.
Nkqu naye wayesoyika.
KwiiJuggernauts, igama likaMarko-limela ingxaki.
Ngamafutshane, naphina apho aya khona lo mntu, uya kuzisa inkathazo naphina apho aya khona.
U-Tang Hao nabanye babesoyika kancinci.
“Wenza ntoni uMark eGritsberg kwakhona?”
"Ke ngoku uLu Hua ubulewe?"
"Ingaba kusenokwenzeka ukuba akakoneliseki, kwaye ufuna ukusibuza ngesono sokungakhathali kwiTempile kaThixo Wokulwa?"
“Lo mfo, kufuneka aphakamise isibhakabhaka ukuze ame?”
Ubuso bukaTang Hao babukrakra, kwakungekho kunceda ngamagama akhe, kwaye kwakubuhlungu nangakumbi.
Ngeli xesha, ngenxa yemicimbi kaMarko, yonke iMartial God Temple yaphoswa yaphanziswa.
Kwiintsuku ezimbalwa ezidlulileyo, umsindo wawuthulisiwe kwaye amajoni e-Jiangbei athotywa.
Kodwa oku akayekanga kwiintsuku ezimbalwa, uMark wambulala kwakhona?
Kuyamangalisa ukuba uTang Hao akanaxhala.
Ayinamsebenzi into ayizeleyo apha, akufuneki kubekho zinto zilungileyo phofu.
Xa uTang Hao wakhalazayo, uKumkani Wabalwi owayekhe wafunda ngefestile ngequbuliso waphakama wemka engakhange athethe.
"UKumkani weZilwi, uza kwenza ntoni?" U-Tang Hao ubuze ngokukhawuleza.
“Yintoni enye endinokuyenza?”
"Le bastard ifuna i-intshi, kufuneka ndibuye umva ndize ndibuye umva kwi-Martial God Temple?"
UKumkani Wabalwi uMo Gucheng utshilo ngengqondo.
Wayenyamezele uMarko ixesha elide ngokwaneleyo, ngaphambi kokuba aqwalasele imeko iyonke, wayixhathisa intshukumisa yentliziyo yakhe.
Kodwa kwiintsuku ezimbalwa ngaphambi kokuba inyamalale, uMark weza eGritsberg ukuphinda enze ingxaki.
Ngubani onokumelana nale nto?
Uthe akukuva oku uTang Hao, wakhawuleza wambamba.
“Kumkani weZilwa, ungakhathazeki.”
"Into endiyithethileyo ngoku ibiyinto yokuthelekelela."
"Ungathini xa umntu efika eGritsberg eze kuphumla nje?"
Ngale ndlela, hlala apha kuqala neJuggernaut, kwaye ndiza kuya kuye ndibuze ngokucacileyo. ”
"Ukuba uMark ufuna ngokwenene ukugcina i-intshi, andifuni ukuba wenze into, kwaye uTang Hao akazukuyihoya."
Emva kokuthuthuzela uKumkani Wabalwi, uTang Hao ngokungxama wabiza umntu oza kulungisa imoto, kwaye kwangaxeshanye waqhakamshelana nesebe lezobuntlola kwisiXeko saseGritsberg ukumisela indawo kaMark.
Ukusukela ngesiganeko seJiangbei, iTempile kaThixo iMartial God idwelise uMarko njengesihloko soqwalaselo olusondeleyo.
Ngapha koko, isebe lezobuntlola le-karate layalelwa ngokungqongqo ukuba linike ingxelo ngokukhawuleza ukuba uMark uvele eGritsberg.
Ayisiyiyo loo nto kuphela, emva kokuba emkile uTang Hao, iJuggernaut kunye neKing yeFighters ngoko nangoko bomeleza oonogada abakwiNtaba yeYanshan kwaye bayimisa yonke imisebenzi yangaphandle ejikeleze iNtaba yeYanshan.
Umoya oxineneyo wakhawuleza wayigubungela yonke iNtaba yaseYanshan.
Kuqhubeka ntoni apha? ”
“Ngaba kungenzeka ukuba sele uza kungena kwimeko yemfazwe?”
"Ngaba itempile kaThixo womlo kufuneka ihlaselwe yindoda eyomeleleyo?"